Ukuphuza - isifo noma umkhuba othile omubi?
Kusukela ezikhathini zasendulo babekholelwa ukuthi wotshwala - a bawa futhi oziphethe kabi indoda ophuza utshwala kuphela ngoba ngamanyala ngokweqile. Ngazo zonke izikhathi, imilutha ngecala futhi wabaphatha Ukwedelela kakhulu. Kodwa ososayensi baye bathola namuhla ukuthi ukuluthwa utshwala - kuyinto lokugula ngengqondo ukuthi iphathwa ngempela sina. Ezimweni ngamunye ngokuvamile akuzona ngokweyame kunoma yimiphi ukwelashwa noma ngokwengqondo. Ezimweni ezinjalo zihlanganisa nowesifazane, umntwana etshwaleni.
Ukuphuza - kungcono nje umkhuba?
Umkhuba - yikhono ukwenza lutho, hhayi ucabanga inqubo. Ikhono ukuhambisa izandla zakho, ukuletha spoon emlonyeni wakhe - zonke lezi zenzo sifeza ngokuzenzakalelayo. Futhi, kukhona imikhuba ngaphandle okuyinto umuntu akakwazi ukwenza, enjengokubhema. I umkhuba uma uthanda, ungakwazi kalula balahle.
Izejwayezi ezimbi - kunezenzo ukuthi kukhona ngandlela-thile eyingozi empilweni yomuntu. Ngisho nail okuhlabayo ubhekwa umkhuba othile omubi, njengoba sishintsha ukuma kalula.
Izici imikhuba emibi
- imikhuba engalungile ekugcineni anqotshwe lonke yokuphila komuntu. Uma kubhekwa njengendlela umkhuba omubi ukubhema, akukho okwamanje khulula ke ngeke baphelelwe osikilidi zakurennoy.
- Ukusetshenziswa utshwala, izidakamizwa nokubhema kuyalimaza empilweni, leli qiniso Sekuyisikhathi eside kungase kutholakale. Ngakho, imikhuba emibi unciphise ezimpilweni zethu.
- imikhuba engalungile kuhluke esinye isici isici - kubo akulula bangayeki, ukuphila ngaphandle kwabo kubonakala isidina futhi zomile.
Uma umlutha wotshwala kuyisifo - iziphi izimpawu zaso?
Kukhona ezinye eyisisekelo izimpawu umlutha wotshwala: isifiso ongalawuleki utshwala emva kokuthatha ngemithamo emincane, Creepy Hangover, ngezinye izikhathi izinkinga inkumbulo kwenzeke. Izimpawu ngenhla ezibhekwa ezinkulu, kodwa ngaphandle kwabo, kukhona inala non-ezibalulekile.
Izimpawu zokuqala ukusebenzisa uphuzo ngokweqile
- nokulahlekelwa reflex Gag;
- isifiso ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze baphuze zonke utshwala wathenga nokuziphatha okuxekethile e iziphuzo, okungukuthi, umuntu angekhe atjho ephuza vodka noma nogologo;
- ukulahlekelwa ukulawula inani utshwala utshwala idliwe (sincoma sihlolisise abathandekayo babo: lokhu isici is iyashaqisa insimbi);
- ukucasuka, ngokuvamile kakhulu uphawu, kodwa ungacabangi ukuthi iyona uphawu main zokusetshenziswa kabi kotshwala, ngoba abanye abantu becasukile ngenxa yezinkinga emsebenzini noma ngenxa yokukhathala evamile.
Kule minyaka izigaba ukuluthwa utshwala umuntu ulahlekelwa ikhono abayivezi nabantu, nokuziphatha level amathonsi kuqanda, i-amakhono engqondo kuthiwa eziwohlokayo, ngamanye amazwi, kukhona nokucekelwa phansi ngazinye. Abantu abanjalo kunzima kakhulu ukuphuma ukuluthwa utshwala amanethiwekhi. Hhayi ukuba bathi sibhekene nenhlekelele, kuyakufanelekela it, kodwa kumelwe silungiselele babi. Ngezinye izikhathi umuntu engenaye ongalihlenga isifiso sokuba ngilulame.
Ukuluthwa utshwala nokudla ukusetshenziswa uphuzo oludakayo
Lihunyushwe kwelesiHeberu elithi "utshwala" Arabhu kusho "dopey." Futhi, utshwala libhekisela eqenjini antidepressant - izinto okuyinto infatuate ubuchopho kanye kuholela isenzo engalawuliwe. Uma sikhuluma ngezingozi utshwala, kubalulekile ukusho umonakalo kwezomnotho ezihlobene ngokuqondile isimo yotshwala nokuziphatha kwabo emphakathini. Akunjalo kudala, ososayensi bathole ukuthi ngisho kwafakwa isilinganiso esincane semithi utshwala kunganciphisa umsebenzi zobuchopho ngu 5-10 amaphesenti.
Kusuka umbono wezokwelapha zokusetshenziswa kabi kotshwala - akulutho 'ezinjengesilonda esibhibhayo. umgwaqo okuqondile umlutha wotshwala kuyinto ngokusebenzisa ukuphuza - ukusetshenziswa njalo utshwala isikhathi eside. Ngemva isifo ukubuyisela iziphathimandla onakele cishe akunakwenzeka. Uma umuntu alulame utshwala, kuyodingeka ukuba ahlupheke kukho konke ukuphila kwazo izifo isisindo kuluthola.
Omunye izimpawu evelele zokusetshenziswa kabi kotshwala kuyinto sifo Hangover. Ngokuvamile lubonakaliswa ukungakhululeki ezingokomzimba nezingokwengqondo, palpitations, wezimbangi, noma liyaphambuka Gait, ukuphathwa ikhanda, isandla Isakhiwo sazamazama, nabanye abaningi.
Laba bantu ubuthongo ukubuyisa kakhulu, kunzima ukulala, futhi ebusuku ephupha kabi kwabo. Bavame ukushintsha isimo, ngokuvamile ukuyiveza. iziguli Alcoholic ngokuvamile nombono ongafanele amazwi interlocutor.
Izifo ezivame kakhulu umlutha wotshwala kukhona isifo sesibindi, izilonda, kolwelwesi okungamahlalakhona, umdlavuza pancreatic. Ukuphuza utshwala e esiningi futhi kuholela ukuthuthukiswa sikashukela futhi ukuvela izifo abanomfutho wegazi ophakeme. Alcoholics ezikhathini 2 maningi amathuba okuthi kungatholakala ezithathelwana ngobulili nasezinhlotsheni okuthile engqondweni. Lena akuyona uhlu oluphelele izifo ezihlobene kakhulu etshwaleni.
Lapho ukuphila kuba isihogo
ukuluthwa utshwala Family - lena isimo, ekhishwa okuyinto enzima kakhulu ukuthola. Encwadini olunjalo lomkhaya, baphuze unina, noyise, nokuthi okubi kakhulu into izingane. ukuluthwa utshwala Wezingane, ngenhlanhla, akuvamile, kodwa kwenzeka.
Ngokuvamile ezimweni ezinjalo kuthathela utshwala oyedwa, kanti eyesibili - ukuze inkampani, noma ukuqonda ngaphezulu umlingani wakhe. Lo mkhuba ukuluthwa utshwala umndeni akuyona ezifana ezingavamile - abantu baphuze, isiphuzo kanye isiphuzo. Hhayi umuntu eyodwa umphakathi efanayo oludakayo akusho bacabanga ukuthi utshwala - lokhu kuyinkinga.
okubi Saint Martin sika
Ukuphuza - isifo cishe akunakwenzeka ukuba aphathe. Uma impatho yakhe kuyinto kaningi kakhulu umuntu uyahluleka uma elwa futhi remissions. Lokhu isici lihlotshaniswa kwencika ezinzima ngokwengqondo. Emva isiguli welashelwa nokuvuselelwa yakhe kobuhlungu linqume antidepressant isisindo, ozokusiza ziphathelene nezinkinga kungenzeka.
Ekwelapheni ukuluthwa utshwala ezingamahlalakhona esinqunyiweyo;
- saziso yokwelapha iqembu;
- Ukwelapha niqaphelisa;
- moya yokwelapha reflex;
Coding indlela A. R. Dovzhenko
Ifaka ikhodi zokusetshenziswa kabi kotshwala - lokho kuyinto na? Lokhu mbuzo wabuzwa umuntu ngamunye, sizozama ukuwuphendula. Ingabe indlela psychotherapeutic yokwelashwa utshwala, akhiwa isazi sesayensi esidumile.
ezicini ezinhle kangaka kule ndlela esephepheni
Indlela iye ngokuphindaphindiwe ihlolwe futhi imiphumela ziqinisekiswa practice.
Emva impatho ngenhla ekhiqizwa nandaba eziphikelelayo yiluphi uhlobo utshwala.
imishini Dovzhenko ezifaneleke umuntu ngamunye ofuna ukuqeda ekubeni imilutha yotshwala. Indoda kudingeka aqonde ukuthi ukuluthwa utshwala - isifo kufanele kuthathwe.
Ifaka ikhodi wenziwa esidakayo zilandelana. Inani etholakalayo.
Lapho ukwelapha isiguli ukunikeza umnyuziki yokufihla, le nqubo inikezwe cishe zonke uhlobo izibhedlela enjalo.
Indlela has a nenani elimangalisayo imiphumela emihle - amaphesenti 83-84.
Ukwelashwa Kwenziwa ngendlela ngenhlonipho, ngaphandle ezilulazayo udelele isithunzi sesiguli.
Lapho inqubo lokufaka ikhodi phakathi udokotela kanye nesiguli contact ngamunye kwenzeka.
Abantu kukhona bezibona ukuthi ukuluthwa utshwala zesifazane - kuba kuhle kwesifo esingelapheki esidluliselwa, kodwa akunjalo. Dovzhenko amasu kuzosiza kokubili amadoda nabesifazane.
Ingqikithi zokuphulukisa indlela Dovzhenko
Phakathi ukufaka ikhodi ye narcologist ithwala umphumela ezinye ezingokwengqondo psychotherapeutic kogulayo womuntu enganakile. Waphefumulela nandaba utshwala. Le ndlela inikeza kwisikhathi ebukhoneni abathandekayo.
Ukuphuza - isifo singanqotshwa kuphela ngemizamo ngokuhlanganyela.
Kwakumane kuwukuthi nje isibonelo yezindlela eziningi ukuqeda ukulutheka, ngokuthi etshwaleni. Ungalalela iseluleko sethu, futhi ungathola ucishe indlela ekufanele. Okubaluleke kakhulu, khumbula ukuthi utshwala - lokhu kuyinkinga enkulu ukuthi abantu abakwazi ukubhekana wedwa. Ngokuvamile abantu abaphuza wodwa kanjani awusona ukufa ngaphambi kwesikhathi, leli qiniso liqinisekisa izibalo edabukisayo. Yiqiniso, abanye abantu angabhekana ngayo ukuluthwa utshwala ngesicelo izihlobo, kodwa kukhona nalabo nokuncenga, izinyembezi futhi amahlazo musa asize. Kulokhu, umuntu akufanele balindele isimangaliso, ngokushesha kofuna udokotela abanolwazi.
Lapho ungaqiniseki mayelana umtholampilo ethile, ungahlala ufunde mayelana nokusungulwa noma ucele umuntfu avela kubangani. Uma omunye wabo noma umndeni wakho uye wabhekana nenkinga efanayo, nawe kufanele izibuze izindaba ephulukisa.
Wezifo zengqondo Russian: syndrome Kandinsky-Clerambault
Indlela ukuqeda warts entanyeni: isu ukwelashwa
Uyini thrombus akanandaba
Isiko Professional: umqondo, izici eziyisisekelo
Analogs "anastrozole". Inani, imiyalelo isicelo, ukubuyekezwa
Amaqiniso ethakazelisayo baking: ikhalori crackers
Ukwesaba izindawo eziphakeme: kanjani ukulwa naso?
Amazambane athosiwe ne ubhekeni kanye anyanisi epanini ukuthosa: iresiphi izithombe
Izinzuzo itshe ukuze kwakhiwe ihholo: isichathule hhayi kuphela
Isikhumulo sezindiza esiseduzane Novorossiysk. Novorossiysk: kanjani ukuba uthole emoyeni